राजनीतिक स्थायित्वपछि अब समृद्धि
तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनपश्चात् मुलुक अहिले राजनीतिक स्थायित्वका साथसाथै समृद्धिका दिशातर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ । के छोटो समयमा आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ त ? यदि छ भने प्राथमिकताका क्षेत्र के–के हुन सक्छन् र द्रुत विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशय यस आलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा उल्लेख गरेका आगामी ५÷१० वर्षमा प्राप्त गर्न खोजिएको प्रारूप अस्वाभाविक लाग्दैन । मात्रै इमानदारिता, पारदर्शिता र इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको छ । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान सक्ने हो भने उल्लेख्य रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लामो समय पर्खनुपर्दैन । यस आलेखमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको सही पहिचान र त्यसको दिगो उपयोगको रणनीति अख्तियार गर्न सकेको खण्डमा के कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालको भूगोल र हावापानी सँगसँगैको कृषि प्रणाली, जलस्रोतको व्यापक सदुपयोग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र पनि समेट्ने हो भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न र आय आर्जन गर्न सकिन्छ । यसका अलावा भू–गर्भभित्र रहेका खनिज र धातुहरू कालान्तरमा गएर अर्थोपार्जनका लागि सहायक हुन सक्ने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासले मात्र पनि छोटो समयमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न र आय आर्जन वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । अतः जुनसुकै क्षेत्रका विकास गर्दा पनि मूलतः तीन वटा क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन बाटो त्यति असहज र समय लाग्ने पनि देखिँदैन । ती तीन वटा क्षेत्र यसप्रकार छन् ।
सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण
भनिन्छ, विकासका आ–आफ्नै मोडेल हुन्छन् । हामीले गर्न चाहेको विकास हाम्रै हावापानी र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ । हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने हो भने तुलनात्मक फाइदाको सिद्धान्तअनुसार कम लगानीमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । कृषि उपजका लागि नेपालको विषम हावापानी कृषि विविधताका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा पाइने हावापानीबाट धेरैभन्दा धेरै प्रकारका कृषि उपज लगाउन र उत्पादन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको हावापानी छ, माटोको अवस्था र स्वास्थ्य के कस्तो छ ? थाहा पाउन अति आवश्यक हुन्छ । हावापानीको कुरा गर्दा नेपाल सरकार मातहत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट विगत ५० वर्षभन्दा अघिबाट सङ्कलन गरिएका मौसमी तथ्याङ्कको विश्लेषण नै वर्तमानका लागि काफी छन् ।
पहिलो स्वदेशको आवश्यकतालाई आधार मानेर र दोस्रो निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर, सूचना र तथ्याङ्कको कुरा गर्दा हामीले वर्षभरिमा कुन–कुन भन्सार नाकाबाट के कति परिमाण र मूल्यमा कुन–कुन कृषि उपजहरू आयात वा निर्यात गरिएका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । यसरी आयात गरिएका कृषि उपजहरू नेपालको कुन ठाउँ र के कस्तो हावापानी र माटोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यस सँगसँगै सिँचाइ र मलको व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थप वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । सिँचाइको कुरा गर्दा नेपालमा सरदर वर्षा १६०० मि.मि. र सरदर वाष्पीकरण १००० मि.मि. लाई मान्दा अझै पनि ६०० मि.मि. बराबर को जलभण्डार हामीसँग रहेको छ । यसको मतलब पानीमा हामी धनी छौँ तर त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेका छौँ । ६००० भन्दा बढी नदी खोलाबाट पानी निरन्तर बगेर सीमा बाहिर गएको अवस्था र मनसुनी अवधिमा पर्ने ८०५ वर्षाको पानीलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मनसुनको अवस्थामा बाढी र हिउँदको समयमा खडेरी भई जल उपयोगमा अभाव सिर्जना हुन गएको छ ।
सूचना सङ्कलन र विश्लेषणको कुरा गर्दा जसरी एउटा घर निर्माण गर्न विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान निकाल्ने गरिन्छ, ठीक त्यस्तै प्रकारले कुनै अमुक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दा त्यसमा लाग्ने लागत अनुमान, उत्पादन गर्न लाग्ने समय र उत्पादन र उत्पादकत्वको यकिन गरी प्रचलित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार हुने लाभ तथा हुन सक्ने जोखिम र जोखिम स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्च (जस्तै बीमा) आदिमा पर्ने खर्च कटाइ यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कमभन्दा कम मानव श्रम प्रयोग गरी खुद नाफा के कस्तो हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण ठाउँअनुसार, यातायात र अन्य पूर्वाधारलाई समेत ख्याल गरी अमुक कृषि प्रणालीका लागि तयार पार्नुपर्छ ।
यति भइसकेपछि सर्वप्रथम देशभित्र नै उपभोग हुने वस्तुको मात्रा र सो उत्पादन गर्न लाग्ने न्यूनतम क्षेत्रफलको निर्धारण गरी हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू र त्यसमा गरिने कृषि चक्र प्रणालीसमेतलाई आधारमानी कमसेकम आयात विस्थापन गर्ने हिसाबले कृषि रणनीति अवलम्बन गरी आवश्यक परेमा कानुनसमेतको निर्माण गरी आवश्यक हुन्छ ।
सूचना तथा तथ्याङ्कको कुरा गर्दा माटो परीक्षण तथा सो माटोमा कुनै अमुक कृषि प्रणालीका लागि आवश्यक खाद्य तŒवहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारबाट के कुराको आँकलन गर्न सकिन्छ भने अत्यधिक र अवैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गरिएका विषादी र रासायानिक मलको प्रयोगबाट माटोमा अम्लीयपन बढ्न जानु र कुनै खास कृषि उपजका लागि सो माटो अयोग्य हुँदै जानु तथा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको नकारात्मक प्रभावले पनि सो स्थान सो कृषि उपजका लागि विस्तार अयोग्य हुँदै जानु चिन्ताको विषय पनि हो ।
सूचना प्रविधिको प्रचुर उपयोग
सूचना प्रविधिका कारण विश्व नै साँघुरिन पुगेको छ । सूचना प्रविधि र सञ्चारको उपयोग गरी माथि उल्लेख गरिएजस्तो महŒवपूर्ण सूचना सबैतिर तुरुन्त सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । कुनै एक ठाउँमा गरिएको सफलता अर्कोतिर अवलम्बन गर्न र असफलताबाट पाठ सिक्न पनि सूचना, प्रविधि र सञ्चारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसका अलावा कुनै व्यक्ति विशेषलाई परेको समस्या समाधान गर्न आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्न पनि सूचना र सञ्चारको महŒवपूर्ण स्थान हुने गर्छ । नेपालमा हाल प्रयोगमा ल्याइएका सामाजिक मेडियाका अलावा टिभी, रेडियोका माध्यमबाट सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न सहज हुने भएको छ । करिब ४० लाखका हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम जनशक्तिका माझमा पहुँच बढाउन र उपयुक्त उद्यमको पहिचान गर्न पनि सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्न सकिन्छ । भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी प्राप्त भएका सूचनालाई प्रचारप्रसार गर्न तथा कुनै वस्तु विशेषको थप जिज्ञासा दिलाउनका लागि भू–उपग्रहमा आधारित दूर शिक्षा, दूर उपचार पद्धति तथा विज्ञको सरसल्लाह निकै प्रभावकारी हुने गरेका छन् ।
जन परिचालन तथा आम जनसहभागिता ः
द्रूतगतिमा समृद्धि हासिल गर्न धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई परिचालन गर्नु आवश्यक रहन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले ७५३ स्थानीय सरकारको निर्माण गरिसकेको र प्रदेश सरकार बन्नेक्रममा रहेका छन् । वर्तमान संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकार तत्तत् निकायबाट प्रयोग हुने नै छन् । न्यून चेतनास्तर, स्रोतको अभावका कारण एक्लाएक्लै कुनै काम गर्नुभन्दा समुदाय स्तरमै सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा काम गर्दा सफलता प्राप्त गरेका थुप्रै उदाहरण हामीमाझमा रहेका छन् । कृषि मात्र नभएर पर्यटन, उद्यमको विकास गर्न तथा सेवामूलक क्षेत्रमा समेत सामूहिक प्रणाली उत्तम ठहरिन्छ । राज्य स्तरबाट पनि आवश्यक सहयोग तथा समन्वयात्मक भूमिका अब रहने नै भयो । यसले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने र प्राप्त प्रतिफल समुदायका सबै सदस्य माझ समान रूपमा वितरण हुने हुँदा अपनत्वको भावनाको पनि विकास हुन्छ । बिस्तारै उद्यमीका लागि आवश्यक ज्ञान र सीपको विकाससँगै परिस्कृत र ठूला उद्योग खोल्न पनि अभिप्रेरणा मिल्छ । खासगरी ग्रामीण समाजलाई एकैचोटि मूलप्रवाहमा ल्याउन समुदायमा आधारित विकास मोडल उपयुक्त ठहरिन्छन् । ७५३ वटै स्थानीय निकायमा त्यहाँको हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि उत्पादन गर्न सकिएमा एकातर्फ कृषिको आयातलाई न्यून गर्न र क्रमशः निर्यातमुखी कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्छ । थप गुणस्तर कायम गर्दै यान्त्रिकीकरणको व्यापक प्रयोग गरी उत्पादन लागत न्यून गर्न र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न टेवा मिल्छ ।
नेपालको संविधान समावेश�